11 -ka ugu sarreeya deeqaha waxbarasho ee curyaanka maskaxda 2022
Halkan waxaad ka heli kartaa faahfaahin ku saabsan deeqaha waxbarasho ee maskaxda ee maskaxda iyo sida shakhsiyaadka naafanimadan leh ay ugu heli karaan deeqdan waxbarasho.
Waxaa jira shaqsiyaad badan oo adduunka oo dhan ah oo la ildaran hal xanuun, cudur, infekshin, ama naafonimo, ama kan kale oo dadkaasi sida muuqata waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah. Qaar badan oo naafo ah, tusaale ahaan, iskama bixi karaan naftooda waxayna isku halleyn karaan deeqsinimada dadweynaha.
Dadweynaha ayaa markaa ka caawiya iyaga oo sii maraya aasaaska hay'adaha samafalka iyo ururada iyo deeqaha kale si ay uga caawiyaan baahiyaha aasaasiga ah. Mararka qaarkood deeqahaani waxay ka gudbaan xalinta arrimaha aasaasiga ah waxayna sii socdaan si ay uga caawiyaan baahiyaha kale sida deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay kuwa xiiseynaya inay helaan waxbarasho sare.
Qoraalkan inkasta, kama hadli doonno baahiyaha aasaasiga ah ee dadka naafada ah laakiin waxaan diiradda saareynaa deeqaha waxbarasho ee sida gaarka ah loogu talagalay shakhsiyaadka qaba curyaanka maskaxda.
Marka, haddii aad tahay shaqsi leh curyaannimo maskaxeed ama aad taqaanno qof la ildaran waa inaad tustaa maqaalkan maadaama ay si weyn uga faa'iideysan doonto.
Liiska deeqaha waxbarasho ee curyaaminta maskaxda ayaa lagu faahfaahiyay qodobkan waxaana deeqaha waxbarasho loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo shakhsiyaadka ay saameysay naafanimadan. Dadkani, inta qof kasta oo kale oo caadi ah, waxay leeyihiin riyooyin, himilooyin, iyo himilooyin ay iyaguna higsanayaan inay gaaraan.
Iyada oo loo marayo deeqdan waxbarasho ee curyaaminta maskaxda, waxay ku qaadi karaan, hal dhinac ama mid kale, inay ku bilaabaan riyadooda midkood kulleej, jaamacad, ama machad xirfadeed. Sidoo kale, waxay si weyn kor ugu qaadi doontaa naftooda in bulshada, bulshada, iyo adduunka guud ahaan ay ka taxadaraan iyaga iyo ujeeddooyinka ay ka leeyihiin nolosha.
Adigu ma lihid naafanimadan laakiin waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad caawiso qof qaba oo aan xitaa garaneyn sida loo garto ama uusan garanayn macnaha, Daraasaadka Dibadda ee Quruumaha ayaa kugu daboolay.
Waa maxay qallalka maskaxda?
Cudurka maskaxda ku dhaca waa cillad ku dhasha dhaq-dhaqaaqa, murqaha muruqyada, ama qaab-dhismeedka ay sababaan horumarka maskaxda ee aan caadiga ahayn. Daaweyntu way caawin kartaa laakiin xaalada lama daaweyn karo _ka soo qaatay Google
Ciladda murqaha dartiis dhaqdhaqaaqyadooda waxay u muuqan karaan wax laga xumaado, halka qaarkood ay si madax-bannaan u socon karaan kuwa kale waa inay adeegsadaan kursi curyaan ah.
Dadka curyaanka maskaxda ku dhaca ma aadi karaan kulliyad?
Ma isweydiineysaa in dadka qaba curyaaminta maskaxda ay aadi karaan kulliyad, jaamacad, ama dugsi tababar? Haa! - jawaabta taas waa Haa! - waxay aadi karaan hay'ad kasta oo ka sareysa oo ay doortaan sida qof kasta oo kale oo caadi ah.
Waxaa la xaqiijiyay in curyaaminta maskaxdu aysan wax u dhimayn caqliga dadka naafada ahna waxay yeelan karaan ku dhowaad isla caqliga qofka caadiga ah.
Anaga oo aan ku sii dheeraan, aan u gudubno mawduuca ugu muhiimsan. Aqris wanaagsan!
1 Waa maxay qallalka maskaxda?
2 Dadka curyaanka maskaxda ku dhaca ma aadi karaan kulliyad?
3 Deeqaha Deeqaha Cudurka Maskaxda
3.1 AmeriGlide Deeqda Achiever
3.2 Xarumaha Sharciga ee ABC Deeqaha Sannadlaha ah ee Cudurka 'Palsy Palsy'
3.3 Deeqda INCIGHT
3.4 PO Postili Deeq waxbarasho
3.5 John Lepping Deeq waxbarasho
3.6 Deeqda Naafada ee Microsoft
3.7 Charlotte W. Deeqaha Deeqaha Aasaasiga ah ee Ardayda Naafada ah
3.8 Kooxda Garyaqaanka Dhaawaca Dhalashada Dhalashada Deeqda Cudurka Maskaxda
3.9 Bryson Riesch deeq waxbarasho aasaasi ah
3.10 Deeqda waxbarasho ee McBurney ee Ardayda Naafada ah
3.11 Waqooyiga Dhexe Kiwanis Memorial Fund Deeq waxbarasho
Deeqaha Deeqaha Cudurka Maskaxda
Kuwa soo socdaa waa liistada la soo ururiyey iyo faahfaahinta deeqaha waxbarasho ee maskaxda.
AmeriGlide Deeqda Achiever
Xarumaha Sharciga ee ABC Deeqaha Sannadlaha ah ee Cudurka 'Palsy Palsy'
O. Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee Postili
John Lepping Deeq waxbarasho
Deeqda Naafada ee Microsoft
Charlotte W. Deeqaha Deeqaha Aasaasiga ah ee Ardayda Naafada ah
Kooxda Garyaqaanka Dhaawaca Dhalashada Dhalashada Deeqda Cudurka Maskaxda
Bryson Riesch deeq waxbarasho aasaasi ah
Deeqda waxbarasho ee McBurney ee Ardayda Naafada ah
Waqooyiga Dhexe Kiwanis Memorial Fund Deeq waxbarasho
AmeriGlide waa shirkad keenta una qeybisa dhamaan noocyada alaabada marin u helka guriga sida wiishka, wiishka curyaamiinta, iyo waxyaabaha kale ee dhaqdhaqaaqa.
Shirkadan - AmeriGlide - waxay aasaaseysaa AmeriGlide Achiever Scholarship si ay u siiso ardayda kuliyadaha waqtiga buuxa dhigta ee adeegsada buug gacmeed ama awood curyaamiinta ama mootada dhaqdhaqaaqa (maaddaama dadka curyaanka maskaxdu ay isticmaalaan qalabkan, iyaguna way dalban karaan deeqdan waxbarasho). Abaalmarinta $ 2,500 waxaa la siin doonaa hal codsade si loo daboolo kharashyada waxbarashada iyo buugaagta.
Haddii aad xiiseyneyso deeqdan waxbarasho ka dib waxaad buuxisaa shuruudaha soo socda si aad ugu qalanto:
Codsadeyaashu waa inay ka diiwaangashan yihiin shahaadada koowaad ama kuwa qalin jabiya kulleejo afar ama laba sano ah oo la aqoonsan yahay oo ku taal Mareykanka.
Waa inuu leeyahay ugu yaraan hal sano oo waayo-aragnimo kulleejo ah
Ugu yaraan GPA ee 3.0 ayaa loo baahan yahay
Waa inuu noqdaa muwaadin Mareykan ah ama haysto fiiso arday oo sax ah oo macnaheedu yahay ardayda caalamiga ah way dalban karaan.
Codsi buuxa oo soo gudbi jawaabta su'aasha maqaalka - "Waa maxay himilooyinka aad u leedahay xirfaddaada / noloshaada, maxaad u leedahay hadafyadaas, maxaase kugu dhiirrigeliya inaad gaarto?"
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee maskaxda ee sanadlaha ah ee la siiyo hal codsade oo raadinaya, inta lagu gudajiro dhameystirka ama ka helay waxbarasho sare machad la aqoonsan yahay oo ku yaal Mareykanka ama qalinjabinta ama ardayga shahaadada koowaad.
Si aad u dalbato deeqdan waxbarasho, waa inaad dhammaystirto deeqda waxbarasho, soo gudbiso qoraal rasmi ah oo aqoonyahan ah iyo qormo aan ka badnayn laba bog oo teeb garaacis ah, oo hal meel u dhexeysa oo sharraxaya sida ay kugu dhacday curyaanka maskaxda.
INCIGHT waa deeq waxbarasho guud oo loogu talagalay dadka naafada ah taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee maskaxda. Codsadeyaasha xiisaha lihi waa inay ka diiwaangashan yihiin jaamacad la aqoonsan yahay, kulliyad, ama xarun xirfadeed.
Si aad ugu qalanto abaalmarinta Incight ee $ 1,000 codsadeyaal ah waa in lagu ogaadaa curyaaminta maskaxda ama naafonimo kale oo muujiso caddeyn, inaad degan tahay Washington, Oregon, ama California. Codsadeyaashu waa inay sidoo kale muujiyaan waxqabadka akadeemiyadeed ee wanaagsan iyo u adeegida bulshadooda si ay u helaan deeqdan waxbarasho.
PO Postili Deeq waxbarasho
Deeqda waxbarasho ee Postili waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee maskaxda - si gaar ah si gaar ah uma ahan - laakiin kooxaha aan loo baahnayn oo ay ku jiraan ardayda naafada ah. Marka, haddii ay kugu adkaato curyaaminta maskaxda waad dalban kartaa deeqdan waxbarasho.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 4,000 oo la bixiyo sanadkiiba - dib loo cusbooneysiin karo illaa shan sano - illaa 2-7 waayeelka dugsiga sare oo ka socda kooxaha aan la aqoon. Codsaduhu waa inuu haystaa ugu yaraan GPA ee 3.0 miisaanka 4.0 isla markaana muujiyey guul tacliimeed oo xoog leh xagga koorsooyinka xisaabta iyo sayniska.
Codsaduhu waa inuu sidoo kale leeyahay rabitaan xoog leh oo uu ku raadsado shaqooyinka injineernimada korantada, injineernimada kombiyuutarka, ama sayniska kombiyuutarka oo muujiyo baahi dhaqaale. Kaliya deganayaasha Mareykanka ayaa xaq u leh inay codsadaan.
Wadarta abaalmarinta deeqdani waa $ 5,000 waxaana loogu talagalay ardayda leh awood jireed ama maskaxeed oo doonaya inay sii wataan waxbarashadooda hay'ad sare. Maadaama curyaaminta maskaxdu ay tahay naafonimo la xiriirta jirka, markaa waad dalban kartaa deeqdan waxbarasho.
Kaliya ardayda degan NY, NJ, ama PA ayaa dalban kara deeqda waxbarasho.
Microsoft, oo ah shirkadda tiknoolajiyada weyn - waxay u qaabeysaa deeqdan waxbarasho si ay awood ugu siiso dadka naafada ah sidoo kale waxaa ku jira dadka qaba curyaanka maskaxda. Tani waxay ka dhigaysaa deeqda waxbarasho ee 'Microsoft Disability Scholarship' deeqda waxbarasho ee ugu sareysa maskaxda ee qiimaha maskaxda $ 5,000 muddo afar sano ah.
Deeqdan waxaa la siiyaa dugsi sare oo naafonimo leh sida curyaaminta maskaxda oo ujeedadeedu tahay inay kaqeyb gasho xarun xirfadeed ama tacliin si ay ugu sii wadato xirfad tikniyoolajiyad. Codsaduhu waa inuu sidoo kale haystaa ugu yaraan CGPA ee 3.0 ama ka sareeya, muujiyaa awoodaha hoggaamineed iyo baahida dhaqaale.
Dukumiintiyada kale waa saddex qormo, resume, qoraal tacliimeed, iyo laba warqadood oo talo bixin ah.
Mu'asasadani waxay siisaa maalgelin waxbarasho ardayda naafada ah sida curyaaminta maskaxda, autismka, indho la'aanta, iwm.
Ma jiraan wax deeqo ah oo toos loo siinayo arday gaar ah halkii laga siin lahaa kulleejooyin iyo jaamacado la shaqeeya Newcombe Foundation.
Jaamacadaha iyo kulliyadaha wadajirka ah waa:
Jaamacadda Delaware Valley
Jaamacadda Fairleigh Dickinson
Jaamacadda Penn State
Jaamacadda Edinboro ee Pennsylvania
Jaamacadda Long Island University Brooklyn
Jaamacadda New York
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee maskaxda ee maskaxda loogu talagalay oo keliya ardayda ka cabanaya naafanimadan oo aan ahayn deeqda waxbarasho ee guud ee naafada sida kuwa kale ee kor ku xusan.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 2,500 oo la siiyay arday ka diiwaangashan ama laga aqbalay machad sare-kulliyad, jaamacad, ama tababar xirfadeed - oo leh GPA of 2.5 ama ka sareeya. Codsadeyaashu waa inay sidoo kale muujiyaan ogaanshaha cudurka maskaxda.
Shakhsiyaadka qaba curyaaminta maskaxda ama ilmahoodu naafo yahay ayaa dalban kara deeqdan waxbarasho. Waa $ 2,000 illaa $ 4,000 deeq waxbarasho oo la siiyay laba illaa saddex ka mid ah shakhsiyaadka noocan oo kale ah ee horeyba u diiwaangashan ama ku saabsan barnaamijka kuleejka afar ama laba sano ah.
Codsaduhu waa inuu haystaa ugu yaraan GPA ee 2.5 oo leh qormo 200 ereyo ah ama kayar sharraxaadda sababaha uu codsaduhu ugu qalmo deeqda waxbarasho iyo qoraallada rasmiga ah. Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa dadka ku nool Mareykanka laakiin mudnaanta ayaa la siin doonaa kuwa ka socda Wisconsin.
Tani waa deeq waxbarasho guud oo loogu talagalay dadka ku nool hal nooc oo naafo ah ama mid kale sida curyaaminta maskaxda, taasoo ka dhigaysa inay u gudubto mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee maskaxda. Deeqdan waxbarasho ee naafanimada waxaa kaliya oo lagu xaddidi karaa Jaamacadda Wisconsin-Madison, taas oo ah, ardayda doonaya inay codsadaan deeqdan waxbarasho waa inay iska diiwaangeliyaan bachelor-ka, mastarka, ama barnaamijka takhasuska ee jaamacadda.
Waad codsan kartaa deeqda waxbarasho markii aad leedahay cillad la soo sheegay sida curyaaminta maskaxda iyo sannadkaagii ugu dambeeyay ee dugsiga sare oo aad higsaneysid inaad iska diiwaangeliso Jaamacadda Wisconsin-Madison. Waxaad sidoo kale codsan kartaa haddii aad horay uga diiwaangashan tahay jaamacadda.
Dukumiintiyada kale ee lagu dalbado deeqda waxbarasho waxaa ka mid ah laba warqad tixraac ah iyo nuqul akadeemiyadeed oo waxbarashadii hore loo dhammaystiray Waxay u furan tahay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Kani waa deeq waxbarasho sanadle ah oo loogu talagalay dadka qaba curyaaminta maskaxda, oo haddii ay xiran tahay sanadka ama aadan ku guuleysan sannadkan waxaad mar walba isku dayi kartaa sannadka soo socda. Deeqdani waxaa loogu talagalay shakhsiyaadka laga helay maskaxda oo ku qoran barnaamijka la aqoonsan yahay ee jaamacad, koleej, ama xarun xirfadeed.
Kuwani waa deeqda waxbarasho ee curyaaminta maskaxda ee aad codsan karto si ay kuu caawiyaan oo kaaga caawiyaan inaad dib u dhigto khidmadaha waxbarashada kuleejka ama jaamacadda.
Carruurta qaba curyaaminta maskaxda waxay wajihi doonaan dhibaatooyin badan oo xagga horumarka ah xagga qaangaarnimada, madaxbannaanida, iyo u kicitaanka kulliyadda marka loo eego carruurta kala duwan.
Karti la'aanta dhabta ah, waxaa jira jidgooyooyin badan oo laga gudbo, laakiin sidoo kale waxaa jira ilo ay ka mid yihiin caawimaad lacageed, qalab caawimaad, macallimiin, iyo kuwa kale oo ka caawin kara qof inuu u aado kuleejka oo uu halkaas ugu guuleysto
Anaga oo dooneyna in aan sii caawino, annaga oo ah Daraasadaha Dibadda ee Quruumaha waxaan u diyaarinay qodobkan fahamkaaga fudud iyo sida aad ku heli karto kaalmooyinkan inay kuu yimaadaan.
Xaaladdan oo kale, in kastoo, kaalmooyinkani ay ku jiraan qaab deeqo ah oo kaa caawin doona inaad u gudubto kulliyad ama jaamacad ama tababar xirfadeed si aad u hesho xirfad aad waligaa doonaysay iyadoon loo eegin naafonimadaada
Deeqaha Deeqaha Kanada ee ugu sarreeya 17; Bixinta Ugu Badan
13ka Deeqo ee ugu sareeya Ardayda Soo Noqota
Deeq waxbarasho oo buuxa Deeqda Masters Deeq waxbarasho oo diblooma ah Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka
deeqaha waxbarasho ee maskaxdadeeqaha waxbarasho ee naafada
Previous Post:10 Barnaamijyada Heerka Sare ee Maareynta Maareynta Dhismaha
Post Next:9 Koorsooyinka Kelifida ee Darajada Kitaabka Quduuska ah
Pingback: 15ka Deeqo ee Xanuunada Joogtada ah ee ugu sarreeya Ardayda 2022